Vaovao - Inona no hotadiavina rehefa mividy fibre ny milina fanamarihana laser fibra tsara indrindra.
Ny mpanamboatra laser amin'ny fibre dia fantatra ihany koa amin'ny masinina fanoratana laser na masinina manamarika amin'ny laser. Azonao atao ny mampiasa ireo fitaovana ireo amin'ny karazana vy rehetra, fa afaka manamboatra marika sy sokitra maharitra amin'ny plastika sasany ihany koa ianao. Na izany aza, ny fampiasana matetika indrindra dia ny laser haingam-pandeha haingam-pandeha vy vy, aliminioma, fanisy vy, sns. Tsara homarihina fa ny milina Filazana Laser Fiber dia tsy mitovy amin'ny milina fanapahana laser.
Raha hividy milina fanamarihana laser laser ianao amin'ny fotoana voalohany, ireto misy zavatra mila tadiavinao.
Amin'ny tsena ankehitriny, zava-dehibe ny hafainganana. Mila mahazo marika ianao izay hahavita ny asa amin'ny fotoana fohy indrindra. Izany no antony, ao amin'ity torolàlana ity; Niezaka nifantoka tamin'ny hafainganam-pandeha izahay rehefa nifidy ny vokatra tsara indrindra hampidirina ao anaty lisitra. Raha tsy maharaka ny haavon'ny tinady ny marikao dia mijanona ho be ianao, indrindra rehefa mampiasa milina fanaovana marika tsara kokoa ireo mpifaninana aminao.
Ilaina ny vidin'ny famokarana. Io no ampiasaina hamaritana raha mahazo tombony ny orinasa iray na manangona fatiantoka. Noho izany, alao antoka fa mampiasa vola amin'ny milina fanamarihana laser laser ianao fa tonga lafatra izao tontolo izao, nefa tsy mandany vola be. Na izany aza, ny ankamaroan'ny mpividy dia mihevitra fa ny vidiny dia azo ampiasaina hamaritana ny kalitaon'ny vokatra iray; tsy marina izany. Matetika, lafin-javatra maro no raisina rehefa ny entana sy ny kalitao angamba no iray amin'izy ireo.
Raha maharitra ny vokatra dia midika izany fa tsy handany vola amin'ny fikojakojana azy na hitady vaovao. Tsy ho mora simba koa izy io, na dia ampiasaina mandritra ny fotoana maharitra aza. Noho izany, rehefa mividy milina fanamarihana laser, dia mila mahazo antoka ianao fa miaraka amin'ny endri-javatra mety ary tsy marefo izy ireo. Na dia mety ho marefo aza ny fiasa sasany dia alao antoka fa mitandrina azy ireo ianao, ary manome antoka ny faritra toy izany ny orinasa mpamokatra. Mba hamaritana ny faharetana, afaka mizaha toetra ny vokatra ianao ary hijery ny fomba fiasan'izy ireo. Ary mandehana amin'ny famerenana sy famaritana ny vokatra.
Ireo fisehon'ny vokatra iray milaza hoe manavao na tsia. Alohan'ny hametrahana ny volanao amin'ny vokatra iray dia mila mahazo antoka ianao fa manana ny endriny farany izy ireo ary miasa tsara izy ireo. Raha tsy izany dia tsy misy fampiasana ny mividy azy. Ny fomba tsara indrindra hijanonana eo ambonin'ny fifaninanana dia ny fahazoana vokatra izay tsara kokoa noho izay ampiasain'ny mpifaninana aminao. Ary koa, amin'ity dingana ity, hahitana ny fiasa amin'ny milina fanamarihana laser fibra tsara indrindra, andramo ny mampiasa azy ireo ary zahao koa ny fanazavany an-tserasera.
Ny masinina fanaovana marika laser dia efa teo an-tsena efa elaela izao. Manararaotra ny teknolojia tsara indrindra izy ireo mba hahazoana antoka fa ny mpampiasa dia mahazo fampiharana fanamarihana tsy misy kilema sy sokitra. Na izany aza, miasa amin'ny hafainganam-pandeha hafa izy ireo, ary samy hafa ihany koa ny endriny sy ny habeny. Alohan'ny hividianana dia tsara ny manangona vaovao arak'izay azonao atao mba hahafahanao manapa-kevitra. Raha manana olona nampiasa azy taloha ianao dia azonao atao ny manontany azy ireo ny mahatsara sy maharatsy ny vokatra. Hamarino tsara fa azonao avy amin'ny mpivarotra fanta-daza izay fantatra fa manome milina fanaovana marika laser tsara indrindra tany am-boalohany.
Fotoana fandefasana: Mey-02-2021